कुर्सी हल्लिन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे : डा. केसी - CNN EXPRESS
कुर्सी हल्लिन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे : डा. केसी
माघ ३, काठमाडौं । नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले कुर्सी हल्लिन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताएका छन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शनिबार माइतीघरमा बृहत् नागरिक आन्दलोलनका क्रममा सम्बोधन गर्दै डा. केसीले जनतालाई रैती बनाउने काम संवैधानिक अंगले गर्न नहुने बताएका हुन् । जनतालाई रैती बनाउनका लागि होइन, जनताका अधिकार खोस्नलाई होइन,’ डा. केसीले भने ।
उनले संवैधानिक अंगहरु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्ने पनि बताए । त्यस्तै केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार, अपराध, दलाली, धाँधली गरेको र गर्नेहरुलाई पनि संरक्षण दिएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र न्यायालय जनताको निगरानीमा रहेको केसीले बताए । संसद् नै विघटन भइसकेको अवस्थामा संविधानको रक्षा गर्ने काम न्यायालयको भएको पनि डा. केसीले बताए । जनताको आशाको केन्द्र न्यायालय भएको र अहिले न्यायालय अग्निपरीक्षामा रहेको पनि केसीको भनाइ थियो ।
Previous: देशलाई बचाउन प्रतिनिधिसभा विघटन, पुनःस्थापना हुँदा राजसंस्था फर्कन सक्छ : गृहमन्त्री थापा
Next: पुसमा पनि सरकारको आम्दानी कमजोर, सरकारले चालेको कदममा ब्रेक